मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाउन केले दिँदैन ? हामी नै सरकारमा छौं : प्रचण्ड - हाम्रो देश
मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाउन केले दिँदैन ? हामी नै सरकारमा छौं : प्रचण्ड
काठमाडौं । मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अहिले नेकपाभित्र बहसको ‘हटकेक’ बनिरहेको छ । यही सन्दर्भमा शनिबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनले काठमाडौंमा मदन भण्डारीको ६८ औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर एक कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका साथै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत निम्त्याइयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीभन्दा अगाडि बोलेका अध्यक्ष प्रचण्डले गम्भीर सवाल उठाए– हामी नै सरकारको नेतृत्वमा छौं, तर मदन भण्डारीका हत्यारा किन पत्ता लगाउन सक्दैनौं ?
कार्यक्रममा प्रचण्डको प्रश्न थियो– ‘अहिले पनि हामी, आम नेपाली जनतालाई लाग्छ, त्यो दुर्घटना होइन, एउटा भयानक डिजाइनअन्तरगत भएको हत्या हो,… कहिलेकाँही अनौठो लाग्छ, केले दिँदैन हामीलाई ? हामी अहिले त सरकारमा पनि छौं । सरकारको नेतृत्व गरेका छौं । तर, भन्न सक्ने ठाउँमा कहीँ न कहीँ छैनौं । बरु, यसलाई त्यसै त्यसै ढिलो हुन दिउँ, आफैं ठीक हुन्छ भन्नेजस्तो अवस्था छ ।’
प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्ड, दासढुंगाजस्ता काण्डहरु अहिलेसम्म रहस्यमय रहेको बताए । सरकारमा आफ्नै नेतृत्व रहँदा पनि मदन भण्डारीका हत्याराको खोजी गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको प्रचण्डले गुनासो पोखे पनि यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा प्रचण्डले व्यक्त गरेको विचार उनकै शब्दमा
कमरेड मदन भण्डारीको त्यो प्रवृत्ति (सोच्ने, विचार निर्माण गर्ने र नीति कार्यक्रम विकास गर्ने तरिका त्यसअनुसार आफूलाई ढाल्ने) प्रति सम्मान मात्र होइन, त्यसलाई आत्मसाथ गर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेकै हौं । राजनीतिक परिर्वतनसँगै राजनीतिक स्थायित्व कसरी दिने, विकास र समृद्धिको आकांक्षा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा यो (एकता) बाहेक अरु ठाउँ छैनौं भन्ने पायौं । यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण मदनको अवसान भएकै दिन पार्टी एकता घोषणा गर्ने निष्कर्ष हो ।
मैले कुन कुरामा जोड दिन चाहेको छु भने नेपालको इतिहासमा माथिल्लो स्तरका राजनीतिक हत्या, परिहत्याका लामो श्रृंखला छ । राणा शाहीको उदयदेखिको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि कोतपर्वदेखि थुप्रै हत्या प्रतिहत्याका घटना नेपाली समाजले देखेको छ ।
मदन भण्डारी–जीवराज आश्रिमको भयानक हत्याकाण्डपछि दरबार हत्याकाण्ड भयो । त्यो अर्को भयानक हत्याकाण्ड । त्यसको पनि यसैले नै हो भन्न सक्ने ठाउँमा छैनौं । मैले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नारायणहिटी अगाडि उभिएर भनें, (हत्यारा) पत्ता लगाई छोडिन्छ तर… । पत्ता लगाउन सकिएन ।
कहिलेकाँही अनौठो लाग्छ, केले दिँदैन हामीलाई ? जनताले नदिएको त पक्कै होइन । हामी अहिले त सरकारमा पनि छौं । सरकारको नेतृत्व गरेका छौं । तर, भन्न सक्ने ठाउँमा कहिँ न कहिँ छैनौं । बरु यसलाई त्यसैत्यसै ढिलो हुन दिउँ, आफैं ठीक हुन्छ भन्ने जस्तो अवस्था छ ।
वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरुलाई पनि ठा–ठाडै लल्कार्न सक्ने, उनीहरुले बोलाउँदा मलाई फुर्सद छैन भन्न सक्ने नेता पनि हो । ठूला देशका नेताहरुले बोलाएर फकाई फुल्याई गर्दा मदनलाई मनाउन सकिन्छ कि भनेर सोच्दा फुर्सद भएपछि आउँला, अहिले मलाई फुर्सद छैन भन्ने हैसियत राख्ने नेता पनि हो । तपाई हामी यसलाई मदन भण्डारीको महानता ठान्छौं कि कमजोरी ? मलाई लाग्छ, हामी कसैले पनि यसलाई कमजोरी ठान्दैनौं । मदन भण्डारीको देशभक्ति, उद्देश्यप्रतिको निष्ठा र प्रक्रियाप्रतिको गर्व, दृष्टिकोण हो त्यो । त्यसअर्थमा उहाँ महान हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्छौं ।
त्यसो हो भने कहिलेकाँही चिन्ता लाग्ने के हो भने आजभोलि हामी आफ्नो छाला बचाउन लाग्ने चिन्तामा त छैनौं ? अलि भाषा नरम गरेर, नरिसाउन् प्रतिक्रियावादी धेरै भन्नेतिर पो जान थालेका त छैनौं ? यो आरोप होइन, विचार गर्नुहोला । हामी त आजसम्म मारिएका त छैनौं । मदन कति वर्षमा ? ४०÷४२ । हामी त अहिले ६०÷६५÷ं६८ हुँदैछौं । जे होस् मारिएका छैनौं । मारिन पनि सक्छौं । यहाँ विचारणीय छ ।
उहाँको सच्चा उत्तराधिकारी बन्नुपर्छ भन्ने सच्चा उद्देश्यका साथ हामीले असोज १७ मा चुनाव पनि मिलेर लड्छौं र पार्टी एकता पनि गरिछाड्छौं भनेर घोषणा गरेका हौं । जनता र आम कार्यकर्ताबाट अनुमोदित पनि भयो र हामीले मदन–जीवनकै स्मृति दिवसमा पार्टी एकता पनि ग¥यौं । यसको ऐतिहासिक अर्थ छ ।
मलाई लाग्छ, हामी हिजो दुई धारा अलग अलग हुँदाहुँदै एक ठाउँमा आयौं । १२ बुँदे, शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माणमा सहकार्यमार्फत एक ठाउँमा आयौं, त्यसरी नै आयौं, जसरी मदन भण्डारी सांस्कृतिक मोर्चा, माले, एमाले हुँदै आउनुभयो । जसरी उहाँ विभिन्न नीति हुँदै जनताको बहुदलीय जनवादसम्म आउनुभयो । त्यसैले नै हामी पनि अब समाजवादको रणनीति अन्तरर्गत जनताको जनवाद हुँदै अगाडि बढ्छौं भनेर आयौं । यही यसको ऐतिहासिकता र मर्म हो ।